‘अस्वीकृत भएर के भो र ? कामु प्रधानन्यायाधीश मै हुँ,- दीपकराज जोशी - NayaMedia:: Naya Media । Leading Nepali News Portal
‘अस्वीकृत भएर के भो र ? कामु प्रधानन्यायाधीश मै हुँ,- दीपकराज जोशी
शनिबार, साउन १९, २०७५ (August 4, 2018, 9:28 am) मा प्रकाशित
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइको दुईतिहाइबाट अस्वीकृत भएपछि दीपकराज जोशीले कामु प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा काम गर्ने बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भइसक्नुभयो अब के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले प्रतिक्रियामा भनेका छन, ‘अस्वीकृत भएर के भो र ? न्यायालयमै बसेर काम गर्छु । कामु प्रधानन्यायाधीश मै हुँ, मैले पेसी नतोके कसले तोक्छ ? संविधानको व्यवस्थाअनुसार पनि वरिष्ठ न्यायाधीशले नै पेसी तोक्छ ।’
प्रधानन्यायाधीशमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भए पनि न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहने वा राजीनामा दिने विषयमा उनले बोल्न चाहेनन् । ‘यो विषयमा अहिले बोल्दिनँ,’ उनले भने । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।